Ingabe ikhona zokuphepha 3D ephrintiwe imoto kagesi? Ingabe nawe alinge uyivule? - China Cixi Lanbo Ukuphrinta
3D NENYANGA LIYISIBANI
ABS intambo / 1.75 / 1kg
ABS intambo /3.0 / 1kg
PLA intambo / 1.75 / 1kg
PLA intambo / 1.75 / 2KG
PLA intambo / 2.85 / 1kg
spool esobala PLA
Ingabe ikhona zokuphepha 3D ephrintiwe imoto kagesi? Ingabe nawe alinge uyivule?
ukuphrinta ubuchwepheshe 3D Kusekelwe imodeli digital, usebenzisa izinto bondable ezifana metal oluyimpuphu noma plastic ukuphrinta isakhiwo ungqimba into by ungqimba. Lobu buchwepheshe has izicelo emkhakheni imigexo, izicathulo, design zezimboni, ukwakhiwa, nokwakha, yezimoto, Aerospace, kanye amazinyo.
Ngo-November 2010, imoto urbee wokuqala emhlabeni libhalwe iphrinta 3D waphuma. Muva nje, Italy umakhi wemoto yakho kagesi XEV yamemezela ukuthi abambisane China sika 3D iphrinta izinto inkampani polymake ukukhiqiza 3D ephrintiwe kagesi LSEV imoto, okuzoba 3D kwezwe yokuqala mass-kukhiqizwa ephrintiwe imoto kagesi. Umjikelezo yokukhiqiza lokhu imoto imayelana Ezinsukwini 3, imoto has a isivinini phezulu 43 mph, okukodwa-93 amamayela, futhi imoto egcwele ukala kg 450 kuphela.
Yiqiniso, Honda Japan muva wakha-isihlalo esisodwa imoto kagesi, umzimba cishe sakhiwa panel 3D inyatheliswe futhi manje ikakhulukazi elisetshenziswa ukuthumela amabhisikidi, kodwa Honda ukuthi imodeli kufanelekile ekukhiqizweni. Nakuba kungekho okungathatha isikhundla idatha ethile yokucushwa 3D ephrintiwe izimoto kagesi, ikakhulukazi idatha zokuphepha, njengoba ubuchwepheshe esisebenzayo, kungase ngisho nobuchwepheshe zibhidlize umkhakha. Kufanele sibe nengqondo evulekile ukusamukela. Kusukela 3D zamanje ephrintiwe izimoto kagesi, basuke bagxila kule miniaturization kanye ongaphakeme-speed Amasimu. Ngikholwa ukuthi kuyoba idatha efanele on 3D ephrintiwe izimoto kagesi e-1-2 iminyaka ezayo, ezifana nokuphepha kanye operability izimoto. , Induduzo nokuningi. I 3D ukunyathelisa lab 'imoto electric isencane isakhasa, futhi kuyoba khona imithetho futhi imibiko yokuhlola ukuphepha Ukugibela Okwenzeka izimoto ezilandelayo, ukuze izimoto othembekile nge abathengi uzoba emakethe, ngakho ngokuhamba kwesikhathi, 3D ephrintiwe izimoto kagesi kuyofika. Lapho zilandele izilinganiso ezithile. Eqinisweni, umlobi Akanandaba ukuvula 3D ephrintiwe izimoto kagesi, uma lokhu 3D ukunyathelisa izincwajana ezingu kagesi imoto izindleko ongaphakeme, ukuphepha kuqinisekisiwe, futhi ingabhekana imoto yabo idinga kungani ungazami it!